Adobe namoaka typografia Open Source | Avy amin'ny Linux
Adobe namoaka typografia Open Source
Mifarana ve izao tontolo izao? 😀
Miala tsiny ny hatsikana, na dia tsy fantatro aza ny antony nahatonga io fanapahan-kevitra io, ilay orinasa fanta-daza Adobe dia navoaka tao amin'ny SourceForge fianakaviana font vaovao nantsoina Source Sans Pro ambany fahazoan-dàlana SIL Font Open Font 1.1, izay mamela ny fanovana na fizarana azy amin'ny fanekena ireo mpamorona na mpanoratra azy.
Namboarin'i Paul D. Hunt ary noforonina hampiasaina amin'ny interface amin'ny mpampiasa, izy no fianakaviana voalohany misy endritsoratra misokatra avy amin'ny Adobe. Ireo fomba izay hitantsika ao dia:
Source Sans Pro Mainty
Loharano Sans Pro ExtraLight
Loharano Sans Pro Light
Loharano Sans Pro Semibold
Raha te hampiasa azy isika dia afaka misintona takelaka avy amin'ny Ity rohy ity ary avy eo kopia ny fampirimana TTF ao anatiny ~ / .fonts o / usr / share / fonts /.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Adobe namoaka typografia Open Source
Open Source sy Adobe? Tsy fantatro fa afaka niaraka tamin'ny fehezanteny mitovy ireo teny ireo. Bibilava mahalana noho ny sofina.
Ary hametraka haingana ireo loharano ao amin'ny Arch ...:
yaourt -S ttf-loharano-sans-pro
Adobe… Mialà anao amin'ny c…. !!!
@elav typography tena tsara dia efa ampiasaiko misaotra! 😀
Iza ny anaran'ilay mpijery Typography miseho amin'ny pikantsary?
Adobe dia maharikoriko toa an'i Apple na Oracle ... saingy fantatr'izy ireo izay ataony!
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny rohy!
Misaotra anao, satria manome lohahevitra mahasoa sy tena azo ampiharina hatrany.
Mamiratra! Tiako izy ireo!.
Efa haiko! Marina ny an'ny Maya! Adobe sy loharano misokatra? Tapitra tompokolahy izao tontolo izao !!!
Andao andramo izy ireo hahitana ny fomba
Chuqui dia hoy izy:
Ry malala, Adobe dia efa nilalao rindrambaiko maimaimpoana talohan'izay: https://twitter.com/Chuqui/status/225317275098562560
Valiny tamin'i Chuqui
Mankany amin'ny fanangonana fontako io.
Handeha any amin'ny bunker antinuclear aho; Ity no famantarana voalohany amin'ny fianjeran'ny loza manerantany.
Ho tonga ny faran'izao tontolo izao rehefa manafaka an'i Helvetica izy ireo.
Gazety TuxInfo # 50 misy